Accueil > Gazetin'ny nosy > Tsy fandriampahalemana: Tsy mahagaga raha mbola mihanaka manenika ny Nosy
Iray amin’ny lafim-piainam-bahoaka mampikaikaika ny rehetra ity tsy fandriampahalemana ity. Araka ny efa ambara ombieny ombieny dia ny fiantohana ny fandriampahalemana sy ny fikatsahana izay fomba hampahomby ny fiarovana ny aina sy ny fananan’ny vahoaka no voalohan-draharahan’ny fitondram-panjakana. Tsy ny amin’izao fotoana ihany izany fa hatramin’izay ary tamin’ny firenena rehetra eto ambany masoandro.
Rehefa ny fandriampahalemana no tsy lavorary dia mibaribary ny tsy fahaiza-mitantan’ny mpitondra fanjakana.
Tsy tokony hifanjana amin’ny olom-pirenena sy ny fikambanana isan-tokony mbamin’ny vondrom-barotra isan-karazany amin’io fiantohana ny fandriampahalemana io ny fanjakana . Ny fifanomezan-tanana no tokony ho anjaran’ny rehetra fa ny tompon’andraikitra voalohan’izy io dia ny fanjakana.
Ny fanjakana mantsy no mitana ny fahefana ahafahana miantoka ny fampanjakana azy io. Ny fanjakana no nampindramin’ny vahoaka ny fahefana koa hampiasa ny volam-panjakana, izay volan’izy vahoaka, ho amin’ny fandavorariana ny fandriampahalemana. Ny fanjakana koa no mampiasa ny teknisiana sy ny mpiasampanjakana natao hiantoka izany fandriampahalemana izany. Manomboka amin’ireo mpitandro ny filaminana izany ary mipaka any amin’ireo rafitra isan-tokony. Ny fanjakana koa no hany afaka mampiasa ny fitaovana natokan’ny vahoaka hiantohana ny fandriampahalemana.
Ambonin’izany, ny mpitondra fanjakana sy ireo rantsa-mangaikany izay misehatra eo amin’izany antsoina hoe “tontolon’ny filaminana sy ny fandriampahalemana izany” dia tsy nisy novozonana na noterena niditra tamin’izany asa izany fa nahim-pon’ny tsirairay, vokatry ny faharesen-dahatr’izy ireo. Tsy miasa maina na maimaim-poana koa anefa izy ireo, manomboka any amin’ny filohampirenena faran-tampony amin’ny raharaham-panjakana ka hatramin’ireo any anivon’ny fiaraha-monina fototra any fa karamaina amin’ny volam-bahoaka, ary omena ireo tamby isan-karazany takian’ny fandavorariana izany fandriampahalemana izany.
Ny fehin’izany rehetra izany dia tsy misy afa-tsy ny fampiharana ny politikam-pirenerna ho amin’ny fandriampahalemana sy ny filaminana sisa ataon’ny tompon’andraikitra isan’ambaratonga mba hahalavorary ny fandriampahalemana. Ny fandaminan-draharaha eo amin’ny samy tompon’andraikitra no itarafana ny fahombiazany na tsia.
Hatramin’izao anefa dia io tontolon’ny fandriampahalemana io no isan’ny voaloahany ibaribarian’ny tsy fahombiazan’ny mpitondra fanjakana nifandimby teto. Vao mainka moa nivandravandra ny tsy fisian’ny fahaiza-mitantana avy amin’ny fitondram-panjakana raha vao ny fandriampahalemana no asian-teny satria tamin’izao fitondrana Rajaonarimampianina izao ange no nisehoan’ny fanafihana mitam-piadiana maro karazany sy avo lenta indrindra teto e! Tamin’izao fitondrana Hvm izao no nahitana izany andian-dahalo an-jatony manafika tanàna hangalarana sy handrobana ny ombin’ny vahoaka. Sy ny maro tsy ho voatanisa e!
Ny lafin-javatra iray tsikaritry ny maro fa anton’ny tsy ahitan’ny fiaraha-monina fahombiazana eo amin’io fifehezana ny tsy fandriampahalemana io sy ny mbola ianahan’izany manerana ny Nosy dia ny tsy fisian’ny politikam-pirenena ho amin’ny fandriampahalemana aloha. Tsy hita taratra koa ny fanovana ny tompon’andraikitra mba tena olon’ny fahombiazana no ampisahanina andraikitra. Na ny ao amin’ny polisim-pirenena ao na ny any amin’ny zandarmariam-pirenena any, na ny eo anivon’ny tafika … dia saika ireo sokajin’olona efa nisahana an’izany rehetra izany ihany no mitokozihitra sy voatana any anivon’ny rafi-panjakana any. Mbola ireo efa tsy nahitam-pahombiazana hatrizay ihany, ankoatra ireo efa lasa nisotro ronono, no mbola mihevitra ny tenany ho tsy azo ihodivirana.
Tsy mahagaga raha tsy ahitan’ny fiaraha-monina ankapobeny masoandro mihiratra izany fandriampahalemana izany. Lasa mametraka fepetra manokana ho azy ny isam-batan’olona sy isan-tokantrano mba hiarovan-tena sy hiarovana ny fananan’ny tena.
Amin’izao vanim-potoana idradradradrana ny fanovana izao, eny hatramin’ny taona 2009 , dia tsy hita voaka teo anivon’ny sehatra natao hiantoka ny fandriampahalemana ny fanaovana olona sy ny fanovana fomba fiasa ary ny fanovana toe-tsaina sy politika ampiharina ho amin’izany.
Tsy mbola mihatra eo amin’ity raharahan’ny tsy fandriampahalemana ity izany ny fiovana mampangetaheta ny ambanilanitra.